Falanqaynta Moto G, midka ugu fiican dhexdhexaadka casriga ee Android | Androidsis
Toddobaad dhan oo dheer, waxaan gacanta ku hayey taleefanka casriga ee cusub ee Motorola Motorola Moto G2014, Si fiican u tijaabinaya oo u xiranayo sida lafdhabarteyda ugu weyn, si aan u hubiyo hilibkeyga sida ay ugu dhaqmeyso isticmaalka maalinlaha ah, qalabkan oo ay ku amaanaan inta badan warbaahinta, u dhigid sidii casriga ugu fiican ee dhexdhexaadka ah ee Android.
Sidee ku arki kartaa gudaha falanqaynta fiidiyowga laga bilaabo cinwaanka maqaalkan, halkaan ku qabsaday dhammaan dareenkayga ku saabsan terminalkan dareenka leh ee Motorola, jiilka cusub ee Motorola Moto G 2nd ama Moto G 2014 waa terminal in, marka loo eego qiimaha lacagta, kaliya 179 euro oo bilaash ah, wuxuu na siiyaa in ka badan astaamo farsamo oo ku filan iyo qeexitaanno iyo awood u leh isticmaalaha caadiga ah ee Android; Hoos waxaan kuugu sheegi doonaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan khibradeyda isticmaale ee Motorola Moto G2014.
1 Naqshadeynta iyo dhammeynta
2 Qalabka iyo astaamaha farsamada
Naqshadeynta iyo dhammeynta
Ku saabsan arrinta bilicsanaanta ama dhammeystirka Motorola Moto G 2014 cusub, waxaan la kulannaa a naqshad gabi ahaanba la cusbooneysiiyay halkee ayuu shaashaddaadu ku koray, ka socota 4,5 ″ dhexroor ilaa 5 ″ dhexroor, in badan oo la jaan qaadaya isbeddelada hadda socda ee uu adeegsaduhu ku raadinayo boosteejooyin leh shaashado xoogaa ka weyn. Shaashad 5-taan ″ iila muuqata aniga waxay ku sii jirtey qiyaastii ugu fiicneyd ee uu isticmaalaha taleefanka casriga ahi maanta filayo.
Marka laga hadlayo agabkeeda dhisme, terminal miyir leh ayaa lagu xusay taas oo ay mudan tahay in la muujiyo naqshad qaabaysan iyo dhabarkaaga, gadaal gadaal halkaada qolof laysku beddeli karo ayaa ka muuqata dareen caag ah taasi waxay siineysaa taabashada ugu sareysa iyadoo ina siineysa xajin tilmaamaysa amniga.
Qalabka iyo astaamaha farsamada
Ku saabsan mawduuca of qalabka iyo astaamaha farsamada Waxaan helnaa isbeddel kale, gaar ahaan heerka shaashadda kumbuyuutarka ee leh teknolojiyada IPS LCD ee, sidaan horay kuugu sheegayba, ay noqotay 5 ″ cabir ahaan iyo ilaalin ahaanba Gorilla Glass 3.
Processor weli waa Snapdragon 400 laga bilaabo Moto G hore, a afar geesle processor ku socda xawaare ugu sareeya ee 1,2 Ghz, weli hayso gigabyte oo RAM ah iyo suurtagalnimada go'aan ka gaarista meel lagu keydiyo gudaha oo ah 8 ama 16 Gb.
Marka laga hadlayo arrinta batteriga, waxay sii wadaa inay ilaaliso awood la mid ah tii ka horreysay iyada 2070 Mah, Awood batteri oo na siin doonta si aad uga gudubto maalinta oo dhan dhibaato la'aan isticmaalka dhexdhexaadka ah ee boosteejada, qiyaastii seddex saacadood oo shaashad ah ama in yar ka badan. Awood u muuqata xoogaa caddaalad ah oo ku xiran hadba usha aan siino terminalka, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la rakibo ka hor maalinta dhammaadkeeda.
Si gaar ah buu aniga ii dulqaaday 22 saacadood lacag la'aan, oo leh dhalaalka ilaa ugu badnaan, dhammaan isku xirnaanta waa la awoodsiiyay. isticmaal GPS nus saac, muusikada adoo adeegsanaya Bluetooth ilaa saacad, qiyaastii saacad ciyaaro ah iyo saacad kale inta udhaxeysa daawashada fiidiyowyada iyo akhriska joornaalada internetka. Dhammaantood leh shan xisaabood oo Gmail ah ayaa la isku darayiyo sidoo kale barnaamijyada Facebook, Twitter iyo G + oo si fiican u wada shaqeeya.
Sida muuqaalka kamaradaha kamaradan cusub ee Motorola Moto G, in daacad loo ahaado oo aan cidna la nacas yeelin, haddana isagoo si weyn uga fiicnaaday qaabkii hore, labadaba tayo ahaan waxay ka socotaa 5 megapixel resolution ilaa the 8 megapixels oo ah qaabkan cusubWaxaan hor joognaa kamarad wanaagsan laakiin iyadoon suurtagal aheyn inaan la dagaallano magacyada waaweyn ee suuqa sida waxa loogu yeero calaamadaha shirkadaha kale.
Qol weyn oo ku yaal Bannaanka iyo meelaha sida wanaagsan loo shiday ayaa sameeya sawirro wanaagsan, inkasta oo habeenkii ama meelaha iftiinkiisu liito ay ka tagto waxyaabo badan oo la doonayo.
Sida kamaradda hore, tani waxay ka soo noqotay 1,3 megabytes oo ah xalka ugu badan ilaa laga gaarayo 2 megabyte taas ayaa na siisa, sida gadaal ama kamaradda weyn, a tayo fiican leh xaaladaha dhalaalaya.
Waxa aad u cad ayaa ah in haddii aad rabto inaad iibsato terminal cusub oo Android ah oo keliya oo keliya si gaar ah tayada kamaraddeeda, markaa Moto G 2014 ma aha terminaalka ay tahay inaad iibsato tan iyo, sidaan kuugu sheegay falanqaynta fiidiyowga, wanaaggeeda ugu fiican kuma jiro si sax ah kamaradahaheeda.
Dhinaca kale, haddii aad raadineyso terminal kaas oo isku xirnaanta ka dhaxeysa qalabka iyo qalabka hawlgalka software-ka uu yahay kan ugu dareeraha badan, adoo hubinaya cusbooneysiinta noocyada cusub ee Android iyo waayo-aragnimo isticmaale sida ugu fiican ee aan maanta uga heli karno qiimahaas aadka loo qaabeeyey ee keliya 179 euro hawl wade bilaash ah, markaa xulashadaadu ma noqon karto wax aan ka aheyn go'aan ka gaarista iibsashada Motorolahan xiisaha leh Moto G2014 o Jiilka labaad Moto G.
Waxaan horey u iibsan karnaa Moto G 2014 cusub dukaamada jirka sida El corte inglés ama internetka at dukaamada sida Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Dib u eegista Moto G: waxaan si fiican u tijaabinnay casriga ugu wanaagsan ee dhexdhexaadka ah ee Android
Goorma ayaa la filayaa in la sii daayo terminalka leh 16Gb ee keydinta ah?
Waxaan ku weydiinayaa sababtoo ah waqtigan xaadirka ah iyo iyada oo aan xidid ahayn, codsiyada laguma dhejin karo kaarka sd.
Ugu jawaab bisho
Waad salaaman tahay, aad ayaan u xiiseynayaa iibsashadiisa laakiin waxaan u baahanahay si aan ugu xirmi karo TV-ga HDMI. Ma tijaabin kartaa haddii ay ku xirmi karto MHL, Slimport ama fiilo la mid ah? Aad baad ugu mahadsantahay horay
Ku jawaab Eliiyaah
Bert 0 dijo
Waxaan hayaa mobaylkan 1 usbuuc wuuna dhaafayaa 4-ta saacadood ee shaashadda. Waa tan ugu fiican xagga tayada / qiimaha, aad loogu taliyay!
Waxaan ku doonayaa mootada g
Ku jawaab cristian Javier moreno
Waxaan leeyahay su'aal ku saabsan terminalkan, nooca Isbaanishku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ka shaqeeyo Latin America, gaar ahaan Nicaragua, waa sababta oo ah su'aasha kooxaha, halkan wuxuu la shaqeeyaa kaliya kooxda 850. Waad ka saari kartaa shakigan saaxiibo aaahhhh hadii barnaamijka softiweerku dhibaatooyin ku yeelan doono dalkayga sida qufullada iwm.
Ku jawaab freddy
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa Nexus 4 waxaanan ka fikirayaa inaan beddelo.
La joogista terminal-kan ma dib ayey uugu sii socotaa? Wixii aan ka arko, marka laga reebo processor-ka iyo RAM, astaamaha intiisa kale aad ayey isugu egyihiin Isticmaalkaygu asal ahaan waa shabakadaha bulshada, isgaarsiinta ... Ma jiro ciyaaro ama codsiyo dalbanaya Kaliya waxaan rabaa inaysan ku dhicin shirarka kala guurka ama si qarsoodi ah barnaamijyadooda u xiro.
Nexus 5 ama Lg G2 ayaa qiimahoodu dhammaaday!
Xaqiiqdii waa terminal kaamil ah isticmaalka aad ii sheegayso.
Waad salaaman tahay, waxaan u iibiyay Terminal-ka lammaanahayga, halka kaliya ee aan aragnona waa inta wicitaanku socdo, dhawaqa codku aad buu u sarreeyaa oo "wuu ka baxsadaa" dhegta qofka taleefanka ku jira. wax walba waa la maqlayaa ... xitaa haddii aan hoos u dhigno mugga, way iska soo noqotaa oo qof walbuu wax ka ogaadaa wadahadalka ..
Ma ku dhici kartaa naqshadaynta af-hayeenka (dhaadheer) ama si fiican uma dahaaran?
waxaa lagu xiri karaa fiilada HDmi
Ku jawaab albertotapia
Maxaad ku xirtay moto g-gaaga waxaan xiiseynayaa si faahfaahsan faaladan ugu dambeysay, taydu waa jiil labaad moto g waana 16 gb
La dheel asxaabtaada ama qoyskaaga Ubisoft's Just Dance Now
LG ayaa ku jeesjeesa iPhone 6 Plus iyo awoodiisa leexinta